भिडियो ब्लग: के नेपाल भन्ने देश महिलाको थोरै, पुरुषको धेरै हो? – |Radio Burtiwan| burtibang khabar
६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५० March 20, 2019 manak	0 Comments
मैले राजनीतिज्ञहरूलाई धेरैपटक लेखेर प्रश्न सोधेको छु। आज पहिलोपटक यो ‘भिडियो ब्लग’ मार्फत् बोलेर प्रश्न सोध्ने प्रयत्न गरेको छु। यी प्रश्न महिलालाई नागरिकताको हकमा गरिएका विभेदबारे छन्।
मेरा यी प्रश्न मुलुकका तीन प्रमुख नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हुन्। संविधान र कानुनमा महिलालाई जुन विभेद गरिएको छ, त्यसमा उहाँहरूकै मुख्य भूमिका छ। नेतृत्वमा रहेकाले त्यो जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनैपर्छ।
तीन जना एक ठाउँ उभिएर ‘हिजो जे भयो भयो, आजको समयमा महिलामाथि विभेद गर्नुहुन्न’ भन्नुभयो भने कसैले विभेद गर्नुपर्छ भन्दैनन्। त्यसैले, यो असमान र अन्यायपूर्ण कानुनको अपजस पनि तपाईंहरूकै थाप्लोमा छ। त्यसैले प्रश्न तपाईंहरूलाई नै।
← राजाको होली मान्दा पनि रिसायौ कि तरुनी !
नेपाली सेनाद्वारा विद्यालय भवन मर्मत →
निसिखोलाका कृषकहरुलाई व्यवसायिक बाख्रापालन सम्बन्धि भेटिनरी तालिम आज देखि सुरु ।। ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५०
नगरप्रमूख नेपाली सहितको टोलीद्धारा बुर्तिबाङका ३ ओटै परिक्षा केन्द्रको अनुगमन । ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५०
अर्गानिक खेती प्रणालीले साह परिवार माडीकै नमुना किसान ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५०
गुञ्जा राय, “कालो दिवस”को समाचार शेयर गरेपछि जागिर चट, के भन्छिन् उनी ? ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५०
पानीजहाज आउँदैछ, बबण्डर गर्नेबेला भएको छैनः देवेन्द्र पौडेल ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५०